Oman: Fampianarana “fandaniam-potoana” · Global Voices teny Malagasy
Oman: Fampianarana “fandaniam-potoana”
MpanoratraRiyadh Al Balushi
Voadika ny 05 Desambra 2018 19:22 GMT
Vakio amin'ny teny Português, বাংলা, Español, English
Tsy mba noraisin'ny mponina ho toy ny rafitra ara-drariny noho ny antony samihafa ny rafitra fandraisana ireo mpianatra amin'ny ambaratonga ambony eny amin'ny oniversite any Oman. Ny rafitra fanabeazana teo aloha ‘Thanawiyah Ammah’ dia voatsikera noho izy mandrisika ny fianarana amin'ny alalan'ny fitadidiana fa tsy mba mampianatra ny tena fomba fianarana. Ny fepetra fidirana ho an'ireo toeram-pampianarana ambony isan-karazany dia miankina fotsiny amin'ny naoty farany azonao, vitsy ireo toerana izay nihevitra ny maha-olona na nanadihady ny mpianatra ho lalam-panekena fandraisana mpianatra. Na izany aza, taona vitsy lasa izay, nametraka rafitra vaovao mitovy amin'ny GCSE sy ny A-Level ny governemanta amin'ny fanomezana safidy ny mpianatra mba hianatra izay taranja rehetra tadiaviny any amin'ny sekoly ambony, ary avy eo ny oniversite hanome naoty ireo taranja tena ilaina fa tsy ny salan'isan'ny fitambaran'ny naoty manontolo. Fiovàna nankasitrahan'ny maro, saingy mbola ao anatin'ny fe-potoana tetezamita isika izao, ka mahazatra ny fahitana lesoka sy fahadisoana. Tsy dia tsara ho an'i Oman ity taona ity, nasiam-panovana noho ny fanafihan'ny Gonu ny fotoam-panadinana, ary fotoana fohy ihany no nomena noho ny fe-potoana hisoratana anarana any amin'ireo anjerimanontolo any ivelany. Hivoaka androany ny naotin'ireo mpianatra Omaniana, rehefa hanambara ny valiny ny Foibe Fanekena Hiditra Fampianarana Ambony.
Tena diso fanantenana tamin'ny Minisiteran'ny Fanabeazana ilay Bilaogera Amjad, saingy mihevitra izy fa manao asa goavana ny Minisiteran'ny Fampianarana ambony. Nanatsonga azy aho:
Omaly dia nanambara ny Minisiteran'ny Fampianarana ambony fa nanao fiovana izy ireo tamin'ny naoty fifindrana kilasy ilaina ho an'ny programa SQU sy ny programa hafa, noho ny naoty ambany loatra azon'ny mpianatra tamin'ity enimbolana ity. Mahatakatra ny minisitera fa ambany kokoa ny naoty tamin'ity telo volana ity tsy tahaka ny telo volana voalohany, ary noho izany dia tsy maintsy nampihena ny mari-pahaizana takiana amin'ny fidirana amin'ny SQU sy programa hafa izy ireo. Alohan'ny hivoahan'ny valim-panadinana, dia efa nomanina ireo fepetra saingy niova izy ireo ankehitriny satria tena nanahirana ny ankamaroan'ny naoty tamin'ity enimbolana ity.
Bilaogera ti3gib kosa etsy ankilany namoaka lahatsoratra feno fahatezerana satria mihevitra izy fa nolaniana tany am-ponja ny 12 taonan'ny fianarany:
Ho an'ny ankamaroan'ireo 12 taona lasa, dia mpianatra nianatra tamin'ny rafi-pampianarana napetraky ny Minisiteran'ny Fampianarana aho. Rehefa vita tanteraka ny fianarako, dia nanokana fotoana handalinana ny lanjan'ny fotoanako sy ny ezaka nataoko tao aho. Very maina. Nanome antoka ireo tompon'andraikitra fa tsy maintsy amin'izay ny lalany. Izany no tsy isalasalana fa nahatonga ahy ho diso fanantenana, izay manapaka ny iray amin'ireo lalana roa. Famoizam-po sy fahafoizana na hatezerana. Nifidy ity farany aho, ary ireo namako no mahatonga ny fahatezerana hitanao androany..
Miditra amin'ny lohahevitra hafa, mieritreritra i Al Maawali, bilaogera fa i Gonu no lafiny iray amin'ny fiovan'ny tontolo iainana hafahafa mitranga amin'ny toetran'i Oman, tsy hita nandritra ny iray volana ny hafanan'ny fahavaratra mamaivay ary tara ny vanim-potoanan'ny fararano ao atsimon'i Oman, ary izany no mahatonga antsika hanontany tena amin'izay zava-mitranga:
Aza mijery lavitra fa jereo ny fiantraikan'izany eo amin'ny firenentsika. Nanamarika isika hatramin'ny faran'ny taon-dasa fa nahemotra ny ririnina. Ary raha nanomboka ny ririnina, dia nijanona ela kokoa noho ny mahazatra ary nitondra orana tsy nampoizina sy rivotra mahery vaika. Nanomboka tampoka be ny fahavaratra taorian'ny volana Jiona izay tena tara ihany koa. Ary ankehitriny dia henontsika ny fitarainan'ny olona ao Salalah mikasika ny fahataran'ny vanim-potoana khareef (mihintsan-dravina).
Handao anao aho amin'ity sarina loza hafahafa indrindra tao Oman ity aho. Eny, asa lasa Omaniana ny fitondrana kamiao.
10 ora izayTiorkia